Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Novambra 2019	• 8 Comments
Nahita hetsi-panoherana maro izahay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy ary mazava fa tezitra ny tantsaha sy mpanorina ary maro hafa. Raha misy zavatra toy izany hitranga dia ho hitanao fa ny mpanao politika sy ny media dia hanao fanaraha-maso simba. Ny fandaharana amin'ny fahitalavitra toa an'i Jeroen Pauw manokana dia tompon'ny fanaraha-mason'ny fahasimbana sy amin'ny fifehezana ny fomba fiheviny.
Ny mpiasan'ny fikarakarana tanora dia tsy maintsy arovana amin'ny herisetra ataon'ny ray aman-dreny tezitra fa tsy ray aman-dreny tezitra hiaro azy ny fanararaotana manodidina ny milina fitateram-bola izay itadiavan'ny maro ny fiveloman'izy ireo, matetika tsy misy fiheverana ny fijalian'ny tena manokana. Tsy maintsy arovana amin'ireo mpanao politika ny miaramila fa ny fanapoahana baomba dia tena famonoana olona. Raha tezitra ireo tantsaha, na ny gazety fampielezankevitra laharana faha 1 aza dia vonona hitatitra fa maro ny olona any Holandy no mino fa nivadika tamin'ny fepetra maitso ny fanjakana. Raha toa ka tafavoaka eo ilay tanana dia tadiavinao manidy ny tenanao ianao. Toa ny olona Holandey ihany no mifoha rehefa mikitika ny kitapom-bolany na ny asa azo antoka. Ny maha-olombelona dia mazàna toa laharam-pahamehana ho an'ny asany na ny asany, fa raha tratra ny kitapom-bolany na ny filaminany dia tsara kokoa ny fikomiana.
2019 manokana, ny taona izay ahitana ireo vondrona matihanina miasa mivantana na ankolaka ho an'ny fanjakana dia toa misy mandrahona na hamonoana na famonoana. Tsy ny mpisolovava ihany, fa ankehitriny kosa curator, mpiandraikitra ny fikarakarana ny tanora ary mpanao gazety dia tsy maintsy miaro ny fanjakana. Mety hilaza zavatra ve izany momba ny horohoro mitranga eo amin'ny fiaraha-monina ary noho izany ny habetsahan'ny fijalian'ny tena manokana? Ireo mpanao gazety no iharan'ireo andian-jiolahy antsoina hoe jiolahimboto, saingy toa natao indrindra hamela ny fampielezan-kevitra matihanina hanohy hamoaka ireo vaovao sandoka tsy misy fotony miaraka amin'ny tsimatimanota izy ireo. Tsy marim-pototra? Eny, mazava ho azy dia miorina tsara, satria noho ny tantaran'ireto mpanao gazety sy mpitantana ny fahitana izao tato anatin'ny taona vitsy, isika dia manana ny satroboninahitra voalohany tsy fantatra anarana na loharano tsy mitonona anarana ary ara-bakiteny ny zava-drehetra dia azo averina sy fitsarana amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao ankehitriny ny fampiatoana ny vahoaka.
Raha tsy ampy ny zavatra, dia nandamina fanoherana hatrany ianao tamin'ny endrika sendika sy ny fivoriana ara-politika. Tsaroanao angamba fa lasa mpanao politika avy amin'ny lohan'ny sendikà i Wim Kok. Ny sendikàn'ny mpivarotra dia tokony hisy ny fanoherana eo amin'ny fiaraha-monina hitsoka ny setroka amin'ny fomba voafehy. Toy izany koa amin'ny antoko politika sy ny olan'izy ireo. Ny tsiro rehetra amin'ny fiaraha-monina dia azo refesina amin'ny alàlan'ireo rafitra vaika lehibe na mijery tarehimarika ary mety ho voataona amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo, fahitalavitra ary media sosialy izay mampita ny resaka. Ary raha mandrahona ny tsy mety izy dia mandefa mpanao pôlitika iray ao anaty limousine mineraly lafo vidy izy ary miaraka amina fakantsary maro hameno ny olona amin'ny resaka volom-bava, maneho ny fahazoana azy, fa ny hafatra ao. ny sisa tavela amin'ny "ilaina izany ary tsy maintsy ataontsika". Heverinao ve fa miasa saina amin'ny kitapom-bolanao na ny mahasoa anao i Mark Rutte? Tena mihevitra ve ianao fa na ny mpanao politika na ny tompon'andraikitra momba ny fantsom-bola be loatra aza dia miahiahy momba ny fahasalamanao? No.
Ka raha te hanova fatratra isika eo amin'ny fiaraha-monina, dia tsy tokony haka ny valan-javaboary fotsiny isika raha mahatafintohina ny tenantsika, fa izao no fotoana tokony hanomboka hijerena izay diso. Amin'izany ianao dia mila mijery lavitra ny haino aman-jery sy ny politika. Jereo lavitra ny oronao. Izy io dia miompana indrindra amin'ny fiovana lehibe eo amin'ny tenantsika, ny fomba fijerintsika an'izao tontolo izao ary ny fomba mora am-peo azy. Raha manomboka mahita ny fomba rehetra hilalaoovana sy hamboarina isika dia afaka manova ny lohahevitra amin'ny ambaratonga fototra ihany koa. Tsy mety izany amin'ny alàlan'ny fametrahana tipp-ex eo amin'ny efijery. Noho io antony io dia tsy maintsy manambara ny antony tsirairay isika. Tokony hanao hevi-diso sy fitaka isika lay rehetra ny mahita amin'ny alàlan'ny fandaharana ary miala amin'izany fitaka sy fitaka izany. Raha ny tena izy, dia tsy ny mpanao politika ihany no resahantsika, ny mpitantana ny fahitana ny media (toa an'i Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, sns), fa momba ny fanoherana voafehy amin'ny politika, ny sendikà ary amin'ny endrika fandisoana anaty fiaraha-monina.
Ao amin'ny boky vaovao ataoko dia miresaka momba ny fitaka rehetra aho ary misy vahaolana mazava. Fotoana tokony handraisana andraikitra ary tokoa ny fanatanterahana dia manomboka amin'ny fijerena ireo sosona fandaharana rehetra amin'ny zava-misy araka ny iheverantsika azy. Tena te hivarotra ny bokinao Vrijland ve ianao? Nanoratra tamin'ny 7 an'ity tranokala ity an-tsitrapo nandritra ny taona maro aho ary nandany vola be. Na izany aza, tsy afaka mamintina ireo taona 7 tsara kokoa noho ny boky aho, ary izany no antony nandraisako ny olana. Fohy sy mandroso, fa fitaratra mazava ary nosoratana tamim-pitiavana. Napetrako angovo betsaka ao, satria raha ny hevitro dia mila miova ny ahy. Fotoana tokony hisian'ny fiovana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina izany ary afaka hitranga ihany raha toa ka miharihary ny maso ary amin'ny lafiny rehetra. Nahavita ny tsara indrindra nataoko aho. Mipetraha na mihetsika. Mandray anjara ve ianao?
Geert Wilders mpikomy
Thierry Baudet dia hahasarika indray ny Holandy indray! Marina!
8 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 19
Mieritreritra aho fa ny fihetsiketsehana izay nisy dia tena kely ihany.
Inona no vokatr'izany fihetsiketsehana izany! Nada. Raha manohitra ianao dia tokony hanohy hatrany mandra-pahatratranao zavatra iray dia avy eo ny fotsy mainty. Raha tsy izany dia hanala baraka anao fotsiny ireo mpifindra monina 'ary dia efa nandray an'izany fihetsiketsehana kely izany izy ireo.
8 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 06
Raha ny marina dia mety manana ny paikadiny ihany ry zareo ao amin'ilay fikambanana ..
8 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 34
Marina izany, izay no fomba fiasa, fa araka ny voalazako taloha dia "soa ihany fa miaina amin'ny" lalànan'ny lalàna isika. " Kuch.
Ampitahao ny zava-misy iainan'ny George Orwell sy ny tontolon'i Huxley vaovao misy ankehitriny. Ny fifangaroana tsara, ny cocktail, dia tsy azo tadiavina. Manohy ny fampiasana ny script ny Cheers Guys.
Rehefa nitsidika ny ray aman-dreniko aho dia nahita izao manaraka izao tamin'ny fahitalavitra:
Fotoana fohy talohan'ny nahatakarako ny antony nahatsiravina sy be fihetseham-po toy izany (ary raha ny hevitro tsy manam-pahaizana) dia mamaly an'io lohahevitra io avy amin'i Renske Leijten. Amin'ny farany dia mahakasika vondrona vitsy an'isa amin'ny 8500 izay tena manelingelina azy, saingy misy fanararaotana lehibe kokoa ataon'ny governemanta. Mandra-pahatongan'ny minitra 22: 05 ny mantra tranainy ankehitriny dia naverimberina tamin'ny fomba miolakolaka nataon'ilay mpanolotra azy: "Fa ny ratsy indrindra, ity dia tena fanjakana manohitra ny olom-pireneny". Ny tiako tenenina dia hoe tokony hiaro ny olom-pirenena ny governemanta fa tsy nahavita izany.
Taiza no nahitantsika minisitra toy izany izay nanambara izany tamin'ny feo mahery? "Ao ny governemanta mba hiarovana ny olom-pirenena ary nahomby tanteraka."
Indraindray aho dia tena saiky mankasitraka ny fahombiazan'ny fomba ampiasaina. Ny ray aman-dreniko dia tao anatin'ny fomba "henatra !!" Indraindray aho te hanazava amin'ny ray aman-dreniko hoe ahoana ny fisintonana ny sain'izy ireo amin'ny zavatra tena mandeha amin'ny lohahevitra kely nefa kely ara-pihetseham-po.
Nandritra izany fotoana izany dia najanoko ireo ezaka ireo. Raha manamboatra ny endriny ny aretin-tsaina (azo jerena amin'ny alàlan'ny laharana an-tariby 11-11, tsara, indroa ny laharam-pahavoazana, lache!) Matahotra aho fa hantsoina amin'ny dingana voalohany aho ...
12 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 44
“Ilaina ny fitaterana sahaza satria ny olona tsy nanao heloka bevava dia tsy ao anaty fiaran'ny polisy. Ankoatr'izay, matetika dia tsy ilaina amin'ny ambolambola amin'ity tranga ity. Amin'ny fampiasana fitaterana mety dia entin'ny olona arak'asa amin'ny fomba azo antoka sy mahafinaritra ary tsy mampanan-daka ireo olona ireo. Nisy ny famatsiam-bola natolotra ho an'ny mpanamory fiaramanidina tsara iray nataon'i ZonMW mandritra ny herintaona. Mandritra io vanim-potoana io, dia hodinihina matetika hoe oviana ary rehefa ampiasaina ny fitaterana mety. Ary toy izao koa ny fomba niainan'ny vahoaka nentina: ny olona manana fitondran-tena misafotofoto ary ireo olon-tiana. ”
Tongava aty George Orwell ... sa kabary vaovao ve no nahatonga izany?
"Entina amin'ny fomba azo antoka, mahafinaritra, tsy misy fanilikilihana, matihanina"
12 Novambra 2019 ao amin'ny 00: 51
Ny psycholance dia famelabelarana lehibe momba ny fanendrena nomen'ny governemanta ny governemanta mba hahatsapa fomba fiasa tsara ho an'ny 1 Oktobra 2018 momba ny tarika Vondron'olona mikorontana.
12 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 13
Mampalahelo, tsy fantatro fa mitarika manodidina an'io zavatra io! Soa ihany fa mipetraka any andrefan'ny firenena aho!
Teny nalaina tao amin'ny lahatsoratra etsy ambony:
“Na izany aza, ny polisy dia tsy maintsy manara-maso tsy tapaka ny toe-tsaina. Avy eo ny mpandraharaha iray dia mitondra fiara ho an'ny fiarovana ny mpiasa. Amin'ny taona faharoa izay mihazakazaka ny aretin-tsaina, dia hita ny fitomboana kely amin'ny famoretana. "Mazava ho azy ihany koa izany satria mitondra fiara bebe kokoa isika, fa ny mpitandro filaminana koa dia mahalala ny toerana hahitanay", hoy i Hendriks. "Ary tahaka ny eo amin'ny fiaraha-monina, misy ihany koa ny fitomboan'ny herisetra eto amintsika."
Ny mpiara-monina tamiko teo aloha dia niara-niasa tamin'ny fiara mpitondra marary nandritra ny androm-piainany. Nanontany aho raha nitombo ny herisetra ataon'ireo mpiasan'ny ambolona mandritra ny taona maro. Mazava ny valiny hoe: "Tsia, fa mbola nijanona teo ihany izy ireo nandritra ireo taona ireo. Ny fahasamihafana dia noho ny smarthpone sy ny media sosialy, ireo mpiara-miasa amiko dia efa nampandrenesina indraindray alohan'ny hiverenako any amin'ny trano fonenana. ”
12 Novambra 2019 ao amin'ny 10: 19
Eny, olona maro be izao no nakany ny GGZ gulag
« Inona ny olan'ny nitrogen, maninona no mitaraina ny tantsaha ary nahoana ny fihenan'ny hafainganam-pandeha?
Ny dingana voalohany dia ny fametrahana marika, ny dingana faharoa dia fivoahana: ny bokotra fanaovana vaksiny »
Total visits: 13.902.301
Zonnetje op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
ZalmInBlik op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
Marga op Ny polisy iray izay ratsy kokoa noho ny Nazi Alemanina dia mivelatra toy ny amboadia amin'ny lamban'ny ondry ary tsy hitanao izany
Mifandraisa anjara amin'ny 1.683 hafa